Ezi ojiji na amụma nzuzo - IntegritySyndicate.com
Mbido Ojiji ziri ezi na amụma nzuzo
NKWUKWU OZI EZI: Saịtị a nwere ihe nwebisiinka, nke onye nwebisiinka enyeghị ikike ya mgbe niile. Ihe a na -akwalite nghọta nke okwu dị iche iche metụtara okpukperechi na Iso Ụzọ Kraịst na -emetụtakwa ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme, na okwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị kwenyere na nke a bụ ojiji ziri ezi nke ụdị ihe nwebiisinka a. Dabere na Mbụ 17 USC Nkebi nke 107, a na -ekesa ihe dị na saịtị a na -enweghị uru maka nyocha na ebumnuche agụmakwụkwọ. Ọ bụrụ na -ịchọrọ iji ihe nwebisiinka site na saịtị a maka ebumnuche nke gị nke gafere ojiji ziri ezi, ị ga -enwerịrị ikike n'aka onye nwe nwebisiinka.
Saịtị a kwekọrọ n'ihe ndị na -eduzi iji ihe eme ihe n'ụzọ ziri ezi:
Ọdịdị nke ọrụ nwebisiinka na -abụkarị ntụgharị Bekee nke Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ Agba Ọhụrụ. Nkuzi na nyocha gbasara isiokwu Akwụkwọ Nsọ nwere mmetụta ọdịbendị ma na -enyere ọdịmma ọha aka
Ọnụ ego na nkwado nke akụkụ ejiri ma e jiri ya tụnyere ọrụ nwebiisinka n'onwe ya n'ozuzu ya pere mpe. A na -ehotakarị ihe karịrị amaokwu iri n'ahịrị n'ahịrị. Amaokwu ndị e hotara na -ejedebere n'isiokwu akọwapụtara nke ọma ma na -anọchite anya obere akụkụ nke ọrụ nwebiisinka (erughị 500 n'ime amaokwu 31,373 n'ime Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ amaokwu 7,959 n'ime Agba Ọhụrụ)
Ojiji a nwere obere mmetụta ọjọọ na uru ahịa nke ọrụ nwebiisinka. Nsonaazụ nke ojiji a na -enyere aka ịbawanye ọnụ ahịa ahịa n'ihi ịbawanye mgbasa na nkwalite dị ka isi mmalite ma ọ bụ dị ịrịba ama.
Ọrụ ahụ na -agbanwe agbanwe. A na -enye nkọwa maka ọrụ izizi, na -ahazi site na mkpa maka otu isiokwu, ma ọ bụ hazie ịkwado nkwenye dị iche iche na -ekwu maka nkuzi nke Akwụkwọ Nsọ.
Ebumnuche na agwa ejiri mee ihe bụ maka ebumnuche izi ihe na -anaghị akwụ ụgwọ (iji ya abụghị nke azụmahịa).
Nke a bụ webụsaịtị Integrity Syndicate (https://integritysyndicate.com) ma ọ bụ saịtị nwanne nwanyị
1. ichebe nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa; yabụ anyị anaghị ere ozi nkeonwe gị, naanị anyị ga -eji ya maka ebumnuche azụmaahịa doro anya.
2. ị kwenyere na anyị nwere ike iji ozi njirimara nke gị iji mezuo nkwekọrịta a, yana mgbe ị na -erube isi n'iwu ụlọ ikpe ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị ndị ọzọ nwere ikike.
3. anyị anyị kuki, faịlụ ndekọ, na ndị ọzọ iji mepụta profaịlụ nke ndị ọrụ anyị yana ozi agbakọtara bụ nke a ga -amata dị ka nke gị ka anyị wee nwee ike chọpụta nke ọma ọrụ na mmezi sistemụ ga -ebuli ahụmịhe gị na weebụsaịtị. anyị nwere ike ịkekọrịta ozi a n'etiti ndị ọzọ mana ọ bụ naanị n'ụzọ na -anaghị amata gị ma ọ bụ onye ọ bụla n'otu n'otu.
3. sistemụ na -enye gị ohere iji ma zụta ngwaahịa na ọrụ anyị n'ịntanetị. paypal ma ọ bụ onye na -eweta akaụntụ akaụntụ ọzọ na -ahazi ịkwụ ụgwọ gị, anyị anaghị echekwa ozi ego gị.
4. anyị nwere ike ịnye gị ohere ka gị na ndị ọzọ kwurịta okwu, ma ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ nke ndị mmekọ. biko cheta na anyị anaghị ejikwa ma ọ bụ ekwe nkwa n'ụzọ ọ bụla izi ezi ma ọ bụ nchekwa nke ọdịnaya dị na webụsaịtị anyị anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna ọdịnaya ndị ọzọ nyere na webụsaịtị anyị.
5. ozi ọ bụla ị kpughere ndị ọzọ na webụsaịtị anyị ma ọ bụ webụsaịtị ndị ọzọ na -aghọ ozi ọha, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na -ekpebi ikpughe ozi nkeonwe ọ bụla.
6. anyị na -eso usoro nchekwa edobere iji chekwaa ozi gbasara gị n'aka ndị ọzọ na -enyeghị ikike.
7. naanị gị ka ịchekwa nchekwa nke ozi ịnweta akaụntụ gị - ya bụ, aha njirimara, paswọọdụ na adreesị ozi -e.
8. naanị gị ka ọ dị n'aka ịkwado izi ezi nke ozi nkeonwe gị nke anyị ji akpọtụrụ gị. ozi email ọ bụla anyị nwetara nke yiri ka ọ bụ site na adreesị ozi -e anyị nwere na faịlụ maka gị ka a ga -ewere na ọ bụ gị ma ọ bụ onye nnọchi anya gị nwere ikike nke nwere ikike zuru oke imechitere gị ozi.
Ọ bụrụ na ịhapụ okwu na saịtị anyị ị nwere ike banye na ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e na webụsaịtị na kuki. Ndị a bụ maka ịdị mma gị ka ị ghara ịjupụta nkọwa gị ọzọ mgbe ị hapụrụ nkọwa ọzọ.
Weebụsaịtị a na-eji "kuki" nke ya iji bulie ịdịmma onye ọrụ ("kuki" bụ ndekọ data nke sitere na sava weebụ ziga na ihe nchọgharị onye ọrụ wee chekwaa ya maka iweghachite ọzọ). Enweghị data nkeonwe echekwara na "kuki" anyị. Ị nwere ike igbochi ojiji nke "kuki" ma ọ bụrụ na ị machibido ịchekwa "kuki" na ihe nchọgharị gị.
Ị na-achọgharị webụsaịtị ewepụtara nke ọma nke gụnyere mgbasa ozi ndị ọzọ. Ntinye nke teknụzụ nsuso dị ka na -ejedebeghị na kuki na / ma ọ bụ mgbama weebụ ka enyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ ndị a nwere ike iji teknụzụ dị otú ahụ iji kpokọta ọnụ ọgụgụ webụsaịtị a na -amaghị maka nleta gị na nke a na weebụsaịtị ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ a nwere ike jiri ọnụ ọgụgụ a nye mgbasa ozi nke mkpa.
Ndị mgbasa ozi anyị na anyị nwere ike ịnwe ohere ịnakọta ozi gbasara kọmputa gị maka ọrụ anyị. A na -enweta ozi ahụ n'ụzọ mgbakọ na mwepụ maka ojiji anyị ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na saịtị anyị. Data anakọtara agaghị achọpụta gị onwe gị. Ọ bụ nchịkọta data nchịkọta gbasara ndị ọbịa anyị yana otu ha siri jiri akụrụngwa anyị na saịtị ahụ. Agaghị ekerịta ozi gbasara onwe gị n'oge ọ bụla site na kuki. Ị nwere ike họrọ ịjụ kuki niile site na kọmputa gị. Kọmputa ọ bụla nwere ikike ịjụ nbudata faịlụ dị ka kuki. Ihe nchọgharị gị nwere nhọrọ iji mee ka ibelata kuki belata. Onye ọ bụla n'ime ndị mgbasa ozi anyị nwekwara ike iji kuki. Ọ bụghị anyị ka ọ dị n'aka, anyị enweghịkwa ikike kuki ebudatara na mgbasa ozi. A na -ebudata ha naanị ma ọ bụrụ na ị pịa mgbasa ozi.
Enwere ike ịchọta njikọ dị na saịtị anyị nke ndị ọzọ. Weebụsaịtị ndị a nwere amụma nzuzo ha, nke ị kwenyere mgbe ị jikọtara saịtị ahụ. Ị kwesịrị ịgụ iwu nke atọ a. Anyị anaghị anabata ebubo nke ibu ma ọ bụ ibu ọrụ n'ụzọ ọ bụla maka iwu ma ọ bụ njikọ ndị a, ebe anyị enweghị ụzọ ijikwa saịtị ndị ọzọ.
Ibe a nwere ike ịnwe edemede nke otu n'ime ndị na -enye nri mgbasa ozi kwadoro.
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike iji nchịkọta Google, ọrụ nyocha weebụ nke Google Inc. (“Google”). Nchịkọta Google na -eji "kuki", nke bụ faịlụ ederede etinyere na kọmputa gị, iji nyere weebụsaịtị aka inyocha etu ndị ọrụ si eji saịtị ahụ. Ozi kuki mepụtara maka iji webụsaịtị a na -ebufekarị na sava Google na USA ma echekwa ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na arụ ọrụ amaghị aha IP na webụsaịtị a, Google ga -ebelata adreesị IP gị n'ime ndị otu European Union ma ọ bụ na mba ndị ọzọ sonyere na Nkwekọrịta na Mpaghara Akụ na ụba Europe. Naanị n'ọnọdụ pụrụ iche ka aga -eziga adreesị IP zuru oke na sava Google na USA wee belata ebe ahụ. Na nnọchite nke onye na -ahụ maka webụsaịtị a, Google ga -eji ozi a wee tụọ ojiji nke webụsaịtị a, iji chịkọta akụkọ na ọrụ webụsaịtị yana inye onye na -ahụ maka webụsaịtị ọrụ ndị ọzọ metụtara webụsaịtị na ojiji ịntanetị. Adreesị IP nke ihe nchọgharị gị na -ebunye na nchịkọta Google Analytics anaghị ejikọ ya na data Google ndị ọzọ. Ị nwere ike jụ iji kuki site na ịhọrọ ntọala kwesịrị ekwesị na ihe nchọgharị gị, mana biko mara na ọ bụrụ na ịme nke a, ị gaghị enwe ike iji ọrụ webụsaịtị a zuru oke. Ị nwekwara ike igbochi Google ịnakọta data kuki mepụtara yana metụtara ojiji webụsaịtị (gụnyere adreesị IP gị) yana site na nhazi data a site na Google site na nbudata na ịwụnye nkwụnye ihe nchọgharị dị n'okpuru ndị a. njikọ.
Ọ bụrụ na ị rịọ maka nrụpụta paswọọdụ, adreesị IP gị ga-esonye na email nrụpụta.